HR3 लाई समर्थन गर्नुहोस् - ह्याम्पटन रोड्स शरणार्थी राहत
एक गैर-नाफा संस्थाको रूपमा तपाईंको दान हाम्रो सञ्चालनको जीवन रगत हो । ठुलो वा सानो, एक पटक वा चलिरहेको, तपाईंको मौद्रिक दानहरू धेरै सराहनीय छन् र सीधै यहाँ ह्याम्पटन रोडमा शरणार्थी समुदायको सेवा गर्न जानेछन् ।
स्वयंसेवक तपाइँको समय
Hampton Roads भरि शरणार्थीहरूको जीवनमा HR3 को प्रभाव सिधै तपाईंसँग सम्बन्धित छ, हाम्रा स्वयंसेवकहरू। हामीले शाब्दिक रूपमा तपाईं बिना यो गर्न सकेनौं, त्यसैले स्वयंसेवक अवसरहरूमा थप जानकारी प्राप्त गर्न तलको फारम भर्नु भएकोमा अग्रिम धन्यवाद।
HR3 सँग स्वयम्सेवा गर्नको लागि तपाइँको प्रेरणा के हो?
यदि तपाइँ विशिष्ट स्वयंसेवा गतिविधिहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई तल सूचीबद्ध गर्नुहोस्:
कुनै पनि भाषाहरू (अंग्रेजी बाहेक) सूचीबद्ध गर्नुहोस् जसमा तपाईंलाई सञ्चार गर्न सहज लाग्छ:
के तपाईको आफ्नै यातायात छ?
के तपाइँसँग नाबालिगहरूसँग सिकाउने/काम गर्ने अनुभव छ?
तपाईं हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ अरू केहि छ?
आफ्नो सेवा वा स्रोतहरू दान गर्नुहोस्
के तपाईं एक व्यवसाय मालिक वा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ह्याम्पटन रोड्स शरणार्थी राहतलाई समर्थन गर्न आफ्नो सेवा, स्रोत वा प्रतिभा दान गर्न चाहनुहुन्छ? कृपया तलको फारम भर्नुहोस् र HR3 टोलीबाट कसैले छिट्टै तपाईंलाई फिर्ता गर्नेछ!
घरायसी सामान दान गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो वर्तमान आवश्यकताहरूको सूचीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
क्रिब (हालको सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्ने)
भण्डारण डिब्बा (दान संगठन/भण्डारको लागि)
आश्रय (दान संगठन/भण्डारको लागि)
कपडाको र्याक (दान संगठन/भण्डारको लागि)
थर्मल लंच झोला
कृपया ध्यान दिनुहोस्: घरेलु सामानको दान भेटघाट द्वारा मात्र हो। कृपया तलको फारम भर्नुहोस् र HR3 टोलीबाट कसैले तपाईंको सामानहरू दान गर्नको लागि समय तालिका बनाउन पुग्नेछ।
व्यवसायको नाम (यदि लागू भएमा)
तपाईं कुन सामान, सेवा वा स्रोतहरू दान गर्न चाहनुहुन्छ?
म प्रो बोनो व्यावसायिक सेवाहरू प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
म मेरो व्यवसायको स्रोतहरू प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
म अरू केही प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
कृपया तपाईंले प्रस्ताव गर्न चाहनुहुने सेवाहरू वर्णन गर्नुहोस्।
कृपया तपाईंले प्रस्ताव गर्न चाहनुभएको स्रोतहरू वर्णन गर्नुहोस्।
(जस्तै: चन्दा ढुवानीका लागि चलिरहेको भ्यान)
कृपया तपाईंले दान गर्न चाहनुभएको अन्य वस्तुहरू, सेवाहरू वा स्रोतहरू वर्णन गर्नुहोस्।
घरायसी सामान दान गर्दै हुनुहुन्छ? कृपया माथिको हाम्रो "वर्तमान आवश्यकताहरू" सूची जाँच गर्नुहोस्!